Ciidammada Commandos-ka oo Baraawe howlgallo ka wada - Wargeyska Faafiye
Ciidammada Commandos-ka oo Baraawe howlgallo ka wada
Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidammada AMISOM ayaa weli magaalada Baraawe ka wada howlgallo ammaanka lagu xajiinayo, iyadoo howllladaasi ay si gaar ah uga qeyb-qaadanayaan ciidammada Commandos-ka Xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan.
Abaanduulaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliya, saraakiisha AMISOM iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, ayaa maanta Boqolaal shacbiga magaalada Baraawe kula hadlay garoonka Kubadda Cagta ee magaaladaasi, waxa ay dadweynaha u sheegeen in ay gacan siiyaan inta uu socdo howlgalka xasilinta ee magaalada looga baarayo haraadiga Al-Shabaab.
Odeyaasha Dhaqanka oo warbaahinta Qaranka kula hadlayey gudaha magaalada Baraawe, ayaa ballan qaadey in si aan gabaad lahayn ciidammadu ugu sheegi doonaan Al-shabaab haddii ay ku arkaan gudaha magaaladaasi.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsCanada’s new exiles.London : Somali Man admits stabbing girlfriend 57 times.Jesus look alike wows residents zambian town.Muslim teenager 'judged by Heathrow Airport staff'Dowlada Somalia oo Golaha amaanka QM ka Codsatay in laga qaado Cuna qabataynta Hubka